करीना र सैफ अलीको सानो तैमुरको प्यारो स्टाइल : जति प्रशंसा गर्दा पनि कम – Khabaarpati
करीना र सैफ अलीको सानो तैमुरको प्यारो स्टाइल : जति प्रशंसा गर्दा पनि कम
November 12, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on करीना र सैफ अलीको सानो तैमुरको प्यारो स्टाइल : जति प्रशंसा गर्दा पनि कम
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेता सैफ अली खान र करीना कपूर खान दोस्रो पटक आमाबुबा बन्दैछन् । कपूर र पटौदी राजवंशको लाडले तैमुर अली खानको पछिल्लो एक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यस फोटोको जति प्रशंसा गर्दा पनि कम हुन्छ ।
सानो तैमुरको प्यारो स्टाइल तस्वीरमा देख्न सकिन्छ । फोटोमा तैमूर नवजात शिशुलाई आफ्नो काखमा च्यापेर बसेका छन् । फोटोमा देखाइएको बच्चा करीना कपूरको साथी नैनाका हो । भर्खरै, करीना एक सानो गेट–टुगेदरका लागि आफ्नो साथीको घरमा उपस्थित भएकी थिइन् ।
तैमूर पनि करीनासँग त्यहाँ पुगेकी थिइन् । यस पार्टीमा, नैना आफ्नो सानो बच्चा लिएर आइन् । त्यस पार्टीको तस्वीर एकदम भाइरल भइरहेको छ, जहाँ तैमूर नवजात शिशुलाई आफ्नो काखमा राखेर खेल्दैछन् । तैमूरको मुस्कानले प्रशंसकहरूको मन जितेको छ ।
नैनाले यी तस्वीरहरू इन्स्टाग्राममा साझा गरेकी छिन् । सेयर गरिएका तस्वीरमा करीना नैना र अन्य साथीहरूसँग खाने टेबलमा पोज दिदैँ थिइन् । तेस्रो फोटोमा करीना नैना र उनको नवजात शिशुको साथ पोष्ट गरिन् । यी फोटोहरू साझा गर्दा, नैनाले क्याप्शनमा लेखिन्, ‘धन्यवाद बेबो । सियाले उनको पहिलो साथी बनाए ।’
करीना कपूरको बारेमा उनले कुरा गर्दा उनी दोस्रो गर्भावस्थामा रमाईरहेकी छिन् । करीनाले बेबी बम्प फ्लन्ट गर्ने फोटोहरू पनि साझा भइरहेका छन् । पहिलो गर्भावस्था जस्तै, करीना यस पटक पनि सक्रिय छन् । उनी लगातार शुट गर्दैछिन् । भर्खरै करीनाले आमिर खान स्टारर लालसिंह चड्ढाको शुटिङ्ग पूरा गरिन् ।
आमा पाल्नलाई दाजुभाइको मुद्धा, फैसला सुनाउन न्यायाधीशनै धु रु धु रु रो ए…!
दोस्रो विवाहको लागि महेश भट्टले गरे धर्म परिवर्तन, छोरीसँग विवाह गर्ने भनेपछि विवाद !
November 11, 2020 Khabar Pati